IMILILO YASENDLE YENZA UMGANGATHO WOMOYA WASECALIFORNIA PHAKATHI KWEYONA NDAWO IMBI EMHLABENI, NANGEXESHA LOBHUBHANI - IINDABA
Imililo yasendle yenza umgangatho womoya waseCalifornia phakathi kweyona ndawo imbi emhlabeni, nangexesha lobhubhani
Ngelixa ukuvalwa kobhubhane kuncede ukuphucula umgangatho womoya kwihlabathi liphela ngo-2020, i-US yabona umgangatho wayo womoya usiba mandundu- ngakumbi kuNxweme oluseNtshona - enkosi kakhulu ngokuseta imililo yasendle.
Kwaye ngelixa i-Southern California ilawula uluhlu lwe ezona zixeko zingcolisekileyo zase-US ngo-2019 , imililo ka-2020 yahambisa loo mahluko kuMbindi nakuMntla California, ngokutsho ingxelo yonyaka ekhutshwe ngoLwesibini, ngomhla we-16 kweyoKwindla, yi-IQAir , Inkampani yaseSwitzerland ehlangene neZizwe eziManyeneyo ukudala iqonga ledatha lehlabathi elikhulu lomgangatho womoya.
Umgangatho womoya ophuculweyo wabhalwa yi-84% yamazwe e-106 ahlolwe, kodwa iindawo ezihlaselwe yi-wildfire enkulu - equka i-Australia, iSiberia kunye ne-South America-ayizange ihlanganyele kwiinzuzo.
Ezi ziganeko zibe nesiphumo sokungcoliseka komoya okukhulu kwezi ndawo ngeli lixa zikhupha iigesi ezinkulu zegreenhouse, itsho ingxelo.
Imililo yoNxweme lwaseNtshona yonakalisa umgangatho womoya kakhulu ngoSeptemba, xa i-US ibala i-77 ye-100 izixeko ezingcolisekileyo zehlabathi kunye needolophu - kunye neendawo zaseCalifornia ezigqithise uluhlu. Ngo-2020, iyonke, ungcoliseko lwenxalenye - ekwabizwa ngokuba yi-soot-yenyuke e-US nge-6.7% ukusuka ngo-2019.
Noko ke, xa kuthelekiswa nezinye iintlanga, iUnited States ikwindawo yama-22 kumazwe ali-106 nemimandla ebekwe esweni kulo nyaka. Ngelixa oko bekukuhla kwe-12th engcono kunyaka ophelileyo, umgangatho womoya wase-US ngonyaka uhlala ungcono kunamazwe amaninzi.
IBangladesh yayinomoya ombi, ilandelwa yiPakistan neIndiya. ISweden iye yafumana amanqaku abalaseleyo, ilandelwa yiFinland neNorway.
Ingxelo yaphawula ukuba ngelixa i-US Clean Air Act iye yanciphisa ukungcoliseka komoya kwiminyaka engamashumi amahlanu edlulileyo nangona uqoqosho olukhulayo kunye nabemi, amanqanaba aqala ukwanda kwakhona ngo-2016. ukwenzakala ngokuhlehliswa kolawulo kunye nokungabikho kokunyanzeliswa koMthetho woMoya ococekileyo phantsi kolawulo lukaTrump, ingxelo ithi.
Oku kuncipha kuqikelelwa ukuba kube negalelo ekongezeni i-9,700 yokufa kwangaphambi kwexesha ngo-2018 kunye neendleko zoqoqosho ezizigidigidi ezingama-89 zeedola, ngokutsho kwe-IQAir.
Imithetho ejolise ekucutheni ukusasazeka kwe-coronavirus ibe negalelo kumoya ococeke kakhulu kwiindawo ezininzi zehlabathi, enkosi kubantu abaninzi abasebenza ekhaya kwaye baqhuba kancinci. Kodwa abo bosulelwe sesi sifo basenokuba babethe kakhulu ukuba bahlala kwiindawo ezihlala zinxulunyaniswa nomoya omdaka.
Phakathi kwe-7% kunye ne-33% yokusweleka kwi-COVID-19 kungenxa yongcoliseko lomoya lwexesha elide, itsho ingxelo.
Ungcoliseko lomoya luqhekezwa ngokweendidi ezimbini: ungcoliseko oluthile, olukwabizwa ngokuba yi-soot, kunye ne-ozone, eyaziwa njenge-smog. Ngelixa i-ozone iyigesi, i-particulate matter elinganiswe yi-IQAir kunye nezinye iimonitha zomgangatho womoya yingqokelela ye-microscopic particles 2.5 microns okanye enkulu, enokuthi ifakwe kwaye ingene ngokukhawuleza kwigazi. Ububanzi beenwele zomntu bumalunga nama-microns angama-60.
Umba ocolekileyo okwangoku uqondwa njengowona unobungozi kwimpilo yabantu, iingxelo zithi. Ukutyhileka … kuye kwanxulunyaniswa neziphumo ezibi zempilo ezifana nesifo sentliziyo, isifo sokuphefumla kunye nokufa ngaphambi kwexesha.
Ngaphandle kwemililo yasendle, ungcoliseko oluthile lwenziwa ziimoto, amaziko ombane kunye neefektri.
Ngaphandle kweCarlifonia inezona migaqo-nkqubo yelizwe enobundlongondlongo yomgangatho womoya, iSouthern California ihleli ibekwe phakathi kweyona mimandla imbi elizweni kumgangatho womoya.
Ingxelo ye-IQAir yonyaka ophelileyo yafumanisa ukuba i-Los Angeles County yayilikhaya le-14 yelizwe le-25 eyona dolophu imbi kakhulu yongcoliseko lwe-particulate kunye ne-Inland Empire ibala ezinye ezintathu.
I-American Lung Association, ekhupha iingxelo zonyaka zomgangatho womoya ophakathi kweminyaka emithathu edlulileyo, ipeyinte umfanekiso ongcono kancinci kuphononongo lwayo luka-2020. Kumanqanaba eesoot unyaka wonke, iSan Bernardino County ikwindawo yesihlanu kwawona mabi kwilizwe liphela, iRiverside County yayikwindawo yesibhozo kwaye iLos Angeles yayikwishumi elinesihlanu. KuMazantsi eCalifornia, yiLos Angeles County kuphela eye yenza ama-25 aphezulu kumanqanaba osuku olunye.
I-ozone - okanye i-smog - i-Lung Association yayinohlalutyo olubi: I-5-county-county Los Angeles metro area was the smoggiest region in the country , ixesha le-20 kwiingxelo zonyaka ze-21 ukuba indawo iphezulu kuloluhlu.
Ukuyichitha ngakumbi, iSan Bernardino County yabizwa ngokuba yeyona dolophu imbi esizweni ngenxa yomsi, kwaye yalandelwa yiRiverside kunye neLos Angeles counties, ngokwengxelo. I-Orange County nayo ifumene ibakala elingaphumeleliyo kwi-smog nangona yayingadweliswanga phakathi kwe-25 embi kakhulu yelizwe.
Izixeko ezimbi kakhulu
Kuvavanyo lwayo lweedolophu kunye nezixeko zase-US ezili-1,412 ngo-2020, i-IQAir yafumanisa ukuba ezingama-24 kwezingama-25 zimbi kakhulu zongcoliseko oluthile zaziseCalifornia. Kodwa ngenxa yokuba imililo yasendle yayinempembelelo enkulu kuMbindi nakuMntla weCalifornia, enye kuphela kwezo yayikuMazantsi eCalifornia-Del Rey eLos Angeles County.
Kwinguqu enkulu, yayingaseyondawo zasezidolophini ezinomoya omdaka. Indawo esezantsi kwilizwe lonke yayiyiYosemite Lakes emva koko i-Oakhurst, kufutshane neYosemite National Park, ilandelwa yiSpringville, ngaphandle kweSequoia National Park.
Kodwa kwakubi kakhulu kwenye indawo emhlabeni.
I-10,000 yemithi, kubandakanya i-sequoias enkulu, iyingozi kwaye kufuneka isuswe, amagosa epaki yaseCalifornia athi.
Iileta: Ukulawula amahlathi | Ukugxeka okufutshane | Bullet train | Umgaqo-nkqubo wabaphathi | Yintoni esemngciphekweni | Umthetho waseTexas
Kwiinyanga ezimbini emva kokusongela i-Tahoe Basin, i-Caldor Fire i-100% iqulethwe
Ukutsha okusindileyo kwiiNtaba zeSanta Cruz kwakukwipropathi yomphathi womlilo odla umhlala-phantsi
Uhlaziyo loMlilo we-Estrada: Abacimi bomlilo benza inkqubela, imiyalelo yokuphuma iphakanyisiwe
Kwiidolophu kunye nezixeko ezingama-4,744 eziphononongwe kwihlabathi liphela, iYosemite Lakes yayikwi-233rd embi kakhulu. Yayikuphela kwendawo yase-US engazange iphumelele ubuncinane umlinganiselo wonyaka ophakathi kwi-Index ye-Air Quality Index yase-US, ukubhalisa i-particulate matter concentration ye-37.8 eyifanelekele njengento engafanelekanga kumaqela abuthathaka.
Eyona nto imbi ehlabathini? I-Hotan, i-China, kunye ne-particulate concentration ye-110.2, ilandelwa yi-Ghaziabad, e-Indiya, kwi-106.6, bobabini bafanelekele ukulinganisa okungenampilo kunyaka. UHotan wayenenyanga enye yokulinganisa okuyingozi kwaye enye yayingenampilo kakhulu, ngelixa iGhaziabad yayineentsuku ezintathu zomoya ongekho mpilweni.
I-Yosemite Lakes yafikelela kumanqanaba angafanelekanga kwiinyanga ezimbini ngexesha lomlilo, ngelixa i-Oakhurst yafikelela kwimpilo engafanelekanga kakhulu kwinyanga enye, ngoSeptemba, kwaye ingenampilo kwinyanga elandelayo. Kodwa kunye badibanisa iinyanga ezisixhenxe zomgangatho ophezulu womoya omhle, obizwa ngokuba yi-World Health Organization ekujoliswe kuyo.